China TPE / TPO / PVC Flooring Footmat Extrusion mutsara fekitori nevatengesi | JWELL
Inonyanya kushandiswa kugadzira mhando yePVC Floor dehwe mipumburu. PVC Floor dehwe ine mashandiro eanopokana-kukweshera, ngura kudzivisa, skidproof, zvisingaite uye zvinopisa kudzora, uye inoshandiswa zvakanyanya pamota, hotera, nzvimbo yekuvaraidza, imba yekuratidzira, imba, nezvimwe. Maumbirwo eiyi tambo yekugadzira iri nyore, uye iri nyore kushanda .Sezvo zvichidikanwa nevatengi, zvakashongedzerwa nezvakasiyana zvikamu, zvinoshandiswa kugadzira imwe chete nhurikidzwa, yakawanda-rukoko rinoumbwa kugadzirwa uye zvakare inogona kuve neisina unreeling unit, inoshandiswa kugadzira yemukati kusimbisa kugadzirwa kana pamusoro pechinhu chisina kurukwa machira uye PVC yekushongedza firimu, nezvimwe.
XPE inopupuma furoira kuita kwekubatsira
1) Chikamu chekutanga uye chekuyambanisa chakachinjwa zvakanyanya kudzikisa nzvimbo inokwanisa kupisa mukati uchisangana nezvinodiwa. Panguva imwecheteyo, simba rinochengetwa.
2) Kugoverwa kwekupisa muvira kunokanganisa kukanganisa kwekusanzwisisika kwekupisa kupisa mumahofisi ekunze, uye iri padyo nezvinodiwa kupisa zve XPE inopupuma furo. Gadzira XPE furo mune yakasarudzika nzira yekuita, furo izere uye yakagadzikana.
3) Yakakura kuburitsa. Pakati pemafuro anopupuma izvozvi inogadzirwa muChina, yedu matatu-nhanho choto ine goho rinopfuura 200 kg / h. Zvakare, iyo XPE furo maseru akaomesesa kupfuura iwo maviri-nhanho choto. Iyo gasi yekushandisa yakaenzana neiyo yematanho maviri-evira.
4) Makomba ekucherechedza akaiswa pamadziro emadziro echikamu chinopupuma. Panguva imwecheteyo, chimiro chisina kugadzikana chakamisikidzwa pakubuda kwevira remoto, uye saizi yemuromo wevira inogadziriswa zvinoenderana nemamiriro ekugadzira, kuti uwane simba rekuchengetedza simba.
5) Chiyero chekuwedzera chinogona kusvika 35-40 nguva.
Zvigadzirwa upamhi 1500-2000mm 2000-3000mm
Extruder kududzirwa WDC / 132 － SJZ80 / 156 WDC / 132, SJZ80 / 156, SJZ65 / 132
Max goho chinzvimbo 500-550kg / h 600-750kg / h
Main mota simba 37kw / 55kw 37kw / 55kw / 37kw
Pashure: PET / PLA / CPET Environmental Protection Sheet yekugadzira mutsara
Zvadaro: SPC Yezvakatipoteredza Floor Extrusion Line
PET / PLA / CPET Environmental Protection Sheet aifarira ...
Kunze Kunyorera, PVC Corrugated Bhodhi, PC Hollow Sheet Kuwedzeredzwa, PC Sheet Kuwedzeredzwa, Pe Pp Wood -Purasitiki Yekunze Kuwedzera, PVC Multi Rukoko Heat Insulation Corrugated Board,